मानिसहरु सम्बन्धमा हुँदा पनि किन दिन्छन् धोका ? – Google pati
२२ असार २०७६ ०८:५३
हुन त माइक पेन्सको निर्णय कुनै नौलो होइन । एक सर्वेक्षणका अनुसार ५.८ प्रतिशत मानिसहरु सम्बन्धमा हुँदा कुने अन्य महिला वा पुरुषसँग डिनर वा लञ्चमा जानु धोका दिनु हो भन्ने मान्यता राख्छन् ।
करिब ७० प्रतिशत मानिसले आफ्नो पार्टनरसँग कहिले पनि विश्वासघातको विषयमा कुनै चर्चा नगरेको स्विकारेका छन् । के कुनै सम्बन्धमा रहँदा डेटिङ एप डाउनलोड गर्नु धोका हो ?
कसैका लागि दोस्रो व्यक्तिसँग सेक्स गर्नु धोका हो । कतिले भने मेसेजमा कुरा गर्नु पनि धोका नै हो भन्छन् । भावनात्मक विश्वासघातको परिभाषा तय गर्नु अझ मुश्किल छ । अफिसमा मानिसहरु आफ्ना कुनै साथीसँग नजिक भएका महसुस गर्न थाल्छन् । उनीहरुको प्रतिक्षा गर्छन् । आगमनले निकै खुसी हुन्छन् । अब यसलाई कुनै सम्बन्धमा बाँधिएका व्यक्तिको विश्वासघात मान्ने कि नमान्ने ?
कुनै सम्बन्धमा बाँधिएका मानिसहरु धोकालाई अनैतिक मान्छन् । यस्तोमा यदि कसैले विश्वासघात गरेको छ भने उनलाई के गर्ने ? के उनीहरुले आफ्नो गल्ती मान्नुपर्छ ?